Matanho ekutevera kuti uve nechokwadi chekubudirira kweCommerce yako | ECommerce nhau
Matanho ekutevera kuti uve nechokwadi chekubudirira kweCommerce yako
Ehe, kuvandudza eCommerce kana email haisi basa rakareruka, kunyanya pakutanga. Zvinoda kudzidza uye ruzivo kuti uite chirongwa. Asi kune zvekare zvimwe zvinowirirana chaizvo zvaunofanira kuvimba nazvo kuti usatadze mukuyedza. Semuyenzaniso, uve nechikwata chakanaka chevashandi uye vanobatsirana vanoziva kudhinda manejimendi modhi inoenderana nharaunda mairi yaunogadzirirwa.
Kune rimwe divi, imwe kiyi yekuona kuti kubudirira kweCommerce yako ine sarudzo chaiyo yeiyo dhijitari chikamu uko rako rehunyanzvi basa riri kuenda rinotungamirwa kubva zvino zvichienda mberi. Izvo zvakakosha kuti uzviite zvakanaka pachinhu ichi uye nekudaro iwe unofanirwa kuongorora uye kufunga pane kwaunoda kufambisa zvido zvebhizinesi.
Nezve ichi chikamu chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mukati mekutengesa zvemagetsi, mutsetse webhizinesi wakanangana nefashoni yevakadzi hauna kufanana nekutengesa zvigadzirwa zvemagetsi kana zvemadhijitari. Kunyangwe hwaro hwebhizinesi hwakagara hwakafanana, iwe unofanirwa kuziva chikamu chauri kuenda kunotora makore mazhinji ehupenyu hwako. Mupfungwa iyi, zvinodikanwa kuti iwe upe imwe batanidza nechikamu chebhizinesi iyo yauri kuenda kunozvipira iwe mune yako yemadhijitari adventure.
1 Ita shuwa kubudirira kweCommerce yako: ongorora nharaunda nharaunda
2 Dzidza izvo zvazvino mira padigital chikamu
3 Sarudza zvigadzirwa kana masevhisi anofanira kutengeswa
4 Usakanganwa kusarudza yakanakisa tekinoroji chikuva
5 Gadzira dhizaini dhizaini inokwezva vashandisi
Ita shuwa kubudirira kweCommerce yako: ongorora nharaunda nharaunda
Yekutanga nongedzo yezviito iwe yaunofanirwa kupa kuti uve nechokwadi chekubudirira kweCommerce yako kuita ongororo yakadzama uye yakajeka yemusika niche mauri kuzotama kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete kuendesa zviwanikwa zviwanikwa asi kuti uzive izvo zvinodiwa nevatengi kana vashandisi. Mupfungwa iyi, haugone kutanga kubva pakutanga, asi pachinzvimbo uchafanirwa kuunganidza rumwe ruzivo kuti uone zano remangwana rekutevera.
Iri basa rehunyanzvi rinogona kuitwa kuburikidza nenzira dzakasiyana mukushambadzira kwedhijitari uye kuti iwe unofanirwa kunyorera zvichibva pane zvako chaizvo zvaunoda. Semuenzaniso, mamwe eaya atinokufumura pazasi:
Develop yakasimba uye yakavimbika yekushambadzira studio kuziva kuti kuiswa kwako mudhijitari kunogona sei.
Ita inoda kuongororwa chii chiri mumusika nezve zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa uye kuratidza kuti kupinda kwavo chaiko kungave sei.
Kuongorora zvavanogona kuva vateereri vako kuitira kuti nenzira iyi usarase zviwanikwa zvinogona kudikanwa pane dzimwe nguva mune rako basa rehunyanzvi.
Tarisa kana chiri chakanaka conjunctural nguva yekutanga yako bhizinesi redhijitari. Ichi chikamu chakakosha kwazvo chezviitiko nekuti ndizvo zvinokuudza kana uchikwanisa kuzviita izvozvi kana zvirinani mumwedzi mishoma.
Dzidza izvo zvazvino mira padigital chikamu
Iwe unogona kunge usati wazviziva asi zvitoro zviripo kana chero imwe mhando yebhizinesi kuburikidza netiweki inodzorwa nemutemo iwe waunofanirwa kutevedzera chero zvodii. Kusaziva izvi kunogona kukuunzira dambudziko rinopfuura rimwe kubva zvino. Zvese zviri muhukama nehutongi hweveruzhinji uye mukuvandudza bhizinesi rako chairo.
Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe uzvibvumire iwe kurairwa neyanyanzvi kana bhizinesi maneja anokuudza iwe zvaunofanirwa kuita nguva dzese. Zvisinei, zvichave zvakafanira zvakakwana kuti kubva zvino zvichienda mberi ongorora zviri pamutemo zvinhu zvechitoro chepamhepo kana zvemagetsi zvekutengeserana. Muzviitiko zvese izvi, zvinodzorwa nemitemo yakati wandei, kunyangwe iyo mitatu inonyanya kukosha iri inotevera:
Sarudza zvigadzirwa kana masevhisi anofanira kutengeswa
Kunyangwe zvingaite senge zvisingaite, ichi chikamu chakanyanya kukosha mukuita kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga. Izvo hazvisi zvekutengesa chero chigadzirwa kana sevhisi, asi nezve izvo mauri iwe unokodzera. Zvichida nekuda kwekushambadzira zvinongedzo kana nekuda kweruzivo iwe rwaunarwo nechikamu. Chero zvazvingaitika, hausi mubvunzo wekuitisa rotari kuti uone sarudzo yako yekupedzisira. Pamubvunzo uyu, une zvidiki diki zvinogona kukubatsira kuumba zano iri musangano rayo.
Kutanga, zvakakodzera nguva yacho mukugadzira sarudzo yakanaka yechitoro chako chepamhepo. Kunyangwe kana basa iri richikutora mavhiki mashoma kana kunyangwe mwedzi. Zvirinani kumirira zvishoma pane kusarudza chikamu chisiri icho chauri kuzopa basa rako rebhizinesi mumakore anotevera.
Iwe unogona kuziva kuburikidza nemishumo uye misika zvidzidzo izvo zviri zvekutengeserana zvikamu izvo akaumbwa mu yepamusoro yekutengesa. Kutarisa pazviri pasina mubvunzo kuchaita kuti iri basa rinokosha rive nyore.
Izvo zvakakodzera kufungisisa padanho re ruzivo iwe rwaunogona kuve mune mamwe eakakosha e-commerce. Uye kunyanya kuti iwe unogona kuwedzera kukosha kune izvo zvinopihwa nemakwikwi.
Muzviitiko zvese, unofanirwa chikamu chaunofarira chaizvo. Kana iwe ukasasangana nechinodiwa ichi, zvingangoita kuti mumakore mashoma anotevera iwe unokundikana mukuyedza kwako. Kusvikira iwe ungatofanira kutanga imwe kubva pakutanga kuti utore chitoro chako chepamhepo.
Unofanira kuva kwazvo yakavhurika kune ehunyanzvi maonero izvo zvinogona kusiya simba ravo pachisarudzo chauri kuzoita mumazuva mashoma. Hazvishamise kuti ivo vanokwanisa kukupa iyo isinganzwisisike kiyi nezve yakanakisa bhizinesi chikamu chaunofanira kusarudza.
Usakanganwa kusarudza yakanakisa tekinoroji chikuva
Haufanire kukanganwa mamiriro ezvinhu aya kunyangwe uine sarudzo yakanaka nezve zvigadzirwa kana masevhisi auri kuenda kunotengesa. Ichave yakavakirwa pachokwadi chekuti vanopa mugove wemusika padanho repasirese muvatengesi izvo zvinogamuchirwa. Mupfungwa iyi, chinhu chekutanga chaunofanira kutsanangura kukura kwechitoro chedu chepamhepo. Hazvina kufanana kupinza maitiro aya kubva purojekiti ine mwero pane kubva pane ine chinzvimbo chakanyanya. Muzviitiko zvese, ivo vachazoda kurapwa kwakasiyana zvakanyanya maererano nesarudzo yakasarudzika yehunyanzvi. Pazvinenge zvichidikanwa kuti utarise zvimwe zvakakosha zvakadai seinotevera:
Kana bhizinesi rako bhizinesi rakanangidzirwa kumakambani madiki nepakati nepakati kana kana, nekupesana, rakagadzirirwa kambani hombe kana chirongwa chedigital. Iwe unofanirwa kutsvaga mhinduro ine simba kwazvo uye yakaratidza inoshanda kwazvo kune rimwe remapurojekiti auri kuzokudziridza. Ndichiri kune rimwe divi, chimwe chezvinangwa zvako zvikuru muchikamu chino cheprojekti chinotungamirwa kana iwe chikuva chehunyanzvi chinogona kana kusanakidza uko masocial network akabatanidzwa.
Kune rimwe divi, muzviitiko zvisinganyanye kuda chinzvimbo mukutengesa zvemagetsi unogona kusarudza mhinduro dzisingadhuri. Semuenzaniso, kusarudza yemahara plugins inopihwa nemamwe matekinoroji mapuratifomu. Sezvo mune zvimwe zviitiko, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutarisa akawanda ekunze plugins kuti ugadzire yakanaka online chitoro. Sezvauchaona, une dzimwe nzira dzakawanda dzaungasarudza kubva.
Gadzira dhizaini dhizaini inokwezva vashandisi
Iyi poindi yakakosha kwazvo kuti ubudirire mune yedhijitari chikamu sezvo uchifanira kurangarira kuti kunyangwe dhizaini inokwezva isina kukosha kuti chitoro chepamhepo chishande, zvinokubatsira iwe kuzadzisa ichi chinangwa chakamirirwa kwenguva refu. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, vatengi vanogara vachibhadhara zvakanyanya kune peji rewebhu rine rakanyatso gadzira dhizaini pane iyo inoshaya iyi yakawedzera kukosha.
Icho hunyengeri hunogara hunoshanda zvakanyanya kune vashoma uye vepakati-saizi saiti madhijitari ndizvozvo Mazhinji mapeji akatsvaga zvikamu uye zvikamu zvidiki. Tichifunga nezvechiitiko ichi, iwe unofanirwa kutsanangura nzira idzi mukugadzirwa. Imwe diki diki yausingafanire kukanganwa kubva zvino kuendesa ndeye SEO uyezvezve inosanganisa iwo mazwi akakosha mune H1 uye H2 tag.
Chimwe chinokurudzira iwe kuti ufambire mberi mune rako bhizinesi repamhepo rine chimwe chinhu chakareruka sekuratidza zvimwe zvikamu zvinokubatsira kushambadzira zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Uye zvechokwadi mumwe wavo achadaro ratidza maindasitiri maitiro. Kunyanya, kutarisana nezvipi zvinopihwa kubva mumakwikwi uye izvo zvichave zvako mareferensi mapoinzi kubva zvino zvichienda mberi.
Pasina kukanganwa pasi pechinhu chipi zvacho cheiyo nzira yekubhadhara yaunoda mune zvekushambadzira zvevatengi vako kana vashandisi. Iko kunoratidzwa nhoroondo nevanhu ava. Muzviitiko zvese, maitiro ekuitangisa muchitoro chako chepamhepo ari nyore. Iwe unongofanirwa kuendesa kunze kuti nenzira iyi iwe ugone kuisanganisa iyo yako ecommerce. Kana iwe ukatevera nhanho dzatakafumura iwe uchave nematambudziko mashoma ekubudirira muchirongwa chako chedigital.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Matanho ekutevera kuti uve nechokwadi chekubudirira kweCommerce yako
Maitiro ekushandisa Apple Bhadhara mune yako eCommerce